Ukulungiselela "Ambrobene" - eyaziwa ukukhwehlela imithi, okuyinto kukhishelwa ngesimo amaphilisi, amaphilisi, isiraphu, isixazululo (nemijovo, imuncwe futhi temlomo). Ithuluzi anezakhi mucolytic, ie-ke liquefies phlegm futhi kusiza ukufinyelela kwayo.
I izinkomba eziyinhloko zihlanganisa ephathwa inyumoniya futhi ukucinana kwemigudu yokuphefumula (kokubili ifomu oyingozi futhi ezingalapheki); isifuba somoya bronchial, okuthi ingathiyeki okukhipha isikhwehlela; bronchiectasis.
Omunye ukukhwehlela ephumelela kunazo kubhekwa lesi sidakamizwa "Ambrobene". Isixazululo saphathwa ukuba abadala nezingane ngesimo imijovo noma ngomlomo (zemvelo Ukwakheka esihluke!). Namuhla-ke ingenye ngokuvamile ezisetshenziswa imithi ekhwehlela.
Izingane ngokuvamile okunqunyiwe "Ambrobene" isiraphu. Imiyalelo ebiyelwe iphakethe kumele ngempela ifundwe ngaphambi kokusebenzisa umkhiqizo wakho. I isiraphu lingaphuzwa in iziguli ngifundise ngesifo sikashukela.
Uma une isifuba esomile, ama-ukunqandwa ngempumelelo, kuyoba yokukhalaza "Ambrobene". Ukulungiswa isixazululo ingasetshenziswa inhalations. Ukuze wenze ephefumula, it is elixutshwe ngezabelo ukulingana sodium chloride. Umthelela kubonakala ngokushesha impela. Inqubo ikhuthaza ngaphezulu sokubuyiselwa okusheshayo esimweni esejwayelekile isiguli.
Tablets - lena ifomu evamile ukukhululwa zomuthi "Ambrobene". Isixazululo for umjovo luncanyelwa e ukuthi akunamthelela ngqo kwi pheshana emathunjini, kunokusebenza amaphilisi. Ingasatshenziswa izidakamizwa "Ambrobene" phansi kwesikhumba, intramuscularly, futhi ngemithambo yegazi (nge ukuvuza).
Tablets nokudla noma ngokushesha ngemva kokuba. Bahlanza phansi ngamanzi, okungcono - efudumele. Izinsuku ezintathu zokuqala kumele baphuze amaphilisi amathathu ngosuku ezinsukwini ezintathu ezizayo - amabili. Izingane kumele inikwe i-tablet, kusukela eminyakeni emihlanu.
ewuketshezi "Ambrobene" - isixazululo ingase isetshenziselwe kokubili ephefumula futhi ngaphakathi. Iwuketshezi kungekho nto enemibala emihle esobala, esingeyena iphunga. Umuthi ikhishwe ngendlela omnyama ingilazi ibhodlela nge weThrojani futhi ezisonga lid enamathiselwe wokulinganisa inkomishi. Isixazululo ukusebenza kwangaphakathi udakwe amanzi. Ukuze sokuphuzisa usebenzisa inkomishi sokulinganisa, okwakubekelwa eshiwo ngenhla. Umuthi kumele inikwe izingane ezingaphansi kweminyaka emibili, kodwa hhayi ngaphezulu kuka kabili ngosuku 1 ml.
Olunye uhlobo Ukwakha "Ambrobene" izidakamizwa - gelatine capsule eliqukethe e elimbudumbudu emhlophe. Kufanele uthathe ngemva kokudla futhi zama ukuphuza amanzi amaningi, okuyinto enomthelela liquefaction kanye nomkhiqizo phlegm. Izingane ezingaphansi kweminyaka engu-12 ngeke ukwazi ukunikeza capsule.
Umuthi 'Ambrobene "has Izimo: Hypersensitivity, ukukhulelwa (mina eside), izilonda esiswini, isifo sokuwa, nokwehluleka ukusebenza kwezinso. Okumele kuqashelwe kufanele athathe izidakamizwa kubantu abaphethwe izifo kwesibindi nezinso. Kulokhu kutuswa ukwandisa isikhawu phakathi izidakamizwa imithamo noma ukunciphisa umthamo.
ukungaphathwa kahle imithi kuba ezingavamile. ikhanda Okungenzeka nohudo, ukucanuzela kwenhliziyo, ukuhlanza, ubuthakathaka. ubuhlungu bekhanda kanye ubuthakathaka kungenzeka uma ikhambi liyini ngokushesha bangene "Ambrobene".
Umuthi kumele kuthathwe ngaphambi ukunyamalala oluphelele lwazo zonke izimpawu. A shintsho olunye uhlobo, uma lokho ukwahlulela okunengqondo ngaphezulu udokotela.
Bethaba ngokwethaba kwasemkhosini, yokusetshenziswa
Indlela ekhanyisa izinwele ezimnyama
Umqondisi "Izimpi Star" Dzhordzh Lukas: Biography, umlando ekudalweni kwendoda nowesifazane bokuqala isilomo Saga
Indlela ukupheka inhlanzi trout. trout Baked kuhhavini - yini kangcono!